Linux 5.7-rc5: kandidà famotsorana vaovao ho an'ny kinova farany | Avy amin'ny Linux
Linux 5.7-rc5: kandidà famotsorana vaovao ho an'ny kinova famaranana
Linus Torvalds, tamin'ny alàlan'ny LKML, dia namoaka vaovao vaovao hafa momba ny fampandrosoana ny kernel malalaka sy loharano misokatra. Ity no kinova farany ho an'ny kandidà farany. Raha ny tena manokana dia ny Linux 5.7-rc5, izay efa manakaiky ny faran'ny fampandrosoana hahazoana ny kinova vaovao amin'ny kernel izay hahafahanao mametraka vetivety eo amin'ny distro GNU / Linux tianao miaraka amin'ny vaovao rehetra. Na izany aza, raha te hanandrana azy izao ianao dia azonao atao ny manandrana ity Kandidà famotsorana ity.
Mazava ho azy, tsy tokony esorinao ilay kinova kernel misy anao ankehitriny, satria tsy kinova famaranana io ary mety hanana olana sasantsasany izay mbola hohajaina. Fantatrao, ary heveriko fa tsy ilaina ny mamerimberina azy hatrany, fa ianao azonao atao ny misintona avy amin'ny tranonkala ofisialy ho an'ity Proyect ity: kernel.org. Toerana iray ihany no ahitanao ireo kinova hafa momba ny voan-vanila toy ilay milina amin'ny ora anoratana: Linux 5.6.12.
Raha ny amin'ny ny vaovao Linux 5.7-rc5, ny marina dia araka ny voalaza tao amin'ny mailaka navoaka, dia kinova tsy misy olana na tohina be loatra ho an'ny mpamorona ary tsy toy ny famoahana teo aloha, tamin'ity indray mitoraka ity dia somary kely noho ny salanisa izy io. Izay tsy angona izay tokony raisina ho toy ny zavatra ratsy na miabo, na dia mifamatotra kokoa aza izy, dia tsara kokoa ...
Tamin'ny rc4 teo aloha dia nanana habe ambanin'ny mahazatra izy, mety indrindra noho ny tsy fahampian'ny mpamily ao amin'ny tambajotram-pifandraisana izay mahazatra matetika. Anisan'ny fanovana entin'ity rc5 ity dia misy fandraisana anjara sasany tafiditra ao amin'io lafiny io. Andrasana araka izany ny habe lehibe kokoa. Ho fanampin'ireo fanovana ireo dia nisy ihany koa fandraisana anjara sy fanitsiana hafa. Na izany aza, misy fiovana etsy sy eroa, tsy misy fizarana manokana hisongadinan'ny fandraisana anjara.
ny ejemplo, azonao atao ny mahita fanatsarana ireo mpamily tambajotra tahaka ny efa nataoko, fanavaozana ny kaody miankina amin'ny maritrano sasany toa ny RISC-V, amin'ny lafiny virtualization toy ny kvm, fitaovana, antontan-taratasy sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Linux 5.7-rc5: kandidà famotsorana vaovao ho an'ny kinova famaranana
Godot 4.0: mitohy mandroso ny motera sary loharano misokatra
Microsoft dia handoa hatramin'ny $ 100,000 noho ny fahalemena ao amin'ny Azure Sphere Linux